कसले दुखायो प्रवेगको मुटु ? (भिडियोसहित) | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more कसले दुखायो प्रवेगको मुटु ? (भिडियोसहित)
कसले दुखायो प्रवेगको मुटु ? (भिडियोसहित)
माघ १४ गते, २०७४ - १२:२४
युएई । नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा उदाउँदै गरेका नवगायक तथा संगीतकार प्रवेग दोङको नयाँ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । प्रवासमा रहेर पनि आफ्नो सांगीतिक क्षेत्रलाइ माथि उठाउँदै गरेका गायक दोङको स्वरमा रहेको ‘मेरो मुटु दुखाउने तिम्रो चाह होला…’ बोलको गीत अहिले युट्युवमा निक्कै रुचाईएको छ ।
यस गीतम शब्द लक्की लामाको छ भने संगीत दोङ स्वयंले दिएक छन । युएईका विभिन्न ठाउँमा छायांकन गरिएको उक्त गीतको भिडियोमा सफल युवा व्यवसायी ओम उप्रेती, मोडल रिया श्रेष्ठ र हास्यकलाकार इन्द्र सेन्चुरीको अभिनय रहेको छ । भिडियोलाई राजेश लामाले निर्देशन र रोहित विक्रम कार्कीले छायांकन गरेका हुन् ।
युएइ सरकारको अनुमति लिएर तयार गरिएको उक्त भिडियोमा युएईको विभिन्न ठाउँहरुको मनोरम दृश्य समाबेश गरिएको छ ।
माघ १४ गते, २०७४ - १२:२४ मा प्रकाशित